Iindidi zezihlunu kunye nendlela yokuzisebenzisa ngamahashe | Amahashe eNoti
UJenny monge | | Izixhobo zehashe, Amahashe
I-Spurs sisixhobo esinokusetyenziselwa phantse lonke uqeqesho lwamahashe. Banobubele iinyithi zesinyithi ezilungiselelwe kwisithende seebhutsi zomkhweli ukunceda uhambise ukuhamba kwehashe.
Kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba uzisebenzisa njani kwaye uzisebenzisa nini kuphephe ukuphathwa gadalala kunye amahashe angenzakalisa. Ngale nto kukho imigaqo ethile kuyilo nakusetyenziso lwayo.
Ngaba siyazibona ukuba zeziphi iintlobo zespurs ezikhoyo kunye nendlela yokuzisebenzisa?
Ndikufumanisa kunika umdla ukuvula eli nqaku lithetha malunga nokuba i-spurs iyimfuneko okanye ayimfuneko. Kwiingcinga zam impendulo nguhayi bazi. Ukuba kuyinyani oko ukuzisebenzisa ngokufanelekileyo zinokuba sisixhobo esenza umsebenzi womkhweli ube lula kwaye banokuphucula unxibelelwano nehashe.
Kuya kufuneka ucace gca ukuba ispurs azisenzakalisi izilwanyana zethu, okanye uhlobo lwesohlwayo kwaye ke kufuneka lusetyenziswe ngononophelo. Ukuhamba ngokuchanekileyo nangokufihlakeleyo kufuneka kwenziwe ukuba kungakhabi ihashe lethu.
1 Iinxalenye zespurs
2 Uhlobo lwespurs
2.1 IsiNgesi spur
2.2 Isando sentsimbi
2.3 Ibhola ekhuthazayo
3 Iindidi zemiqhagi kunye nokusetyenziswa
3.1 Inkuku emfutshane
3.2 Umqhagi ophakathi
3.3 Umqhagi omde
4 Ukusetyenziswa kwespurs
4.1 Ungazisebenzisa njani?
Zenziwe ngezinto ezi-6. A arco, ikwabizwa ngokuba ngumzimba, olilungu eligobileyo elifanelana nesithende sebhuthi yomkhweli. Inkqubo ye- imilenze, ziphi iindawo ezihla emacaleni ebhuthi. Inkqubo ye- xhuma, yeyiphi intambo ebambe isantya kunyawo lomkhweli. Inkqubo ye- iqhosha ojoyina umtya kunye nesaphetha. Inkqubo ye- isilayidi okanye i-roulette yile nto ubambe ngayo ihashe ukuze ulivuselele. Kwaye ekugqibeleni umqhagi, pigüelo okanye pihuelo, eyindawo apho i-roulette ibanjelwe khona, nokuba iyajikeleza okanye hayi.
Xa ukhetha ispur, kubaluleke kakhulu ukwazi umahluko phakathi kwezo zinamavili ajikelezayo kunye nezo zingenawo. Ndincoma ezokuqala ukusukela Ivili elijikelezayo liyalithintela ekucinezeleni ulusu lwehashe kunye nokufunxa, okwenza ukuba lubhetyebhetye kunaleyo ingajikeleziyo apho singazenzakalisa lula izilwanyana zethu kunalezo zijikelezayo.
Singafumana iintlobo ezahlukeneyo zespurs:
Yenziwe ngentsimbi engenasici kwaye inobungakanani obahlukeneyo ngokuxhomekeke kubude beqhude. Intloko yoxande inemiphetho egudileyo nengqukuva. Singafumana iintlobo ezahlukeneyo zespurs zesiNgesi:
IsiNgesi spur ngebhola: ibhola inokujikeleza
IsiNgesi spur nge roulette: Iyajiya kwaye inzima, igqityiwe kwivili ye-roulette enediski ejikelezayo.
IsiNgesi spur ngenkwenkwezi: Lilo apho ivili le-roulette linamazinyo endaweni yokuba ligudile.
Yenziwe ngentsimbi engenasici okanye irabha. Umqhagi uhlala malunga ne-20 mm. Intloko ithe tyaba kwaye yoxande.
Yenziwe nge-nickel egqityiweyo njengebhola.
Iindidi zemiqhagi kunye nokusetyenziswa
Imiqhagi inokuba ithe tye okanye ijikeOko kukuthi, banokwalatha ezantsi okanye ngasehashini. Ukongeza koku, kuxhomekeke kubude kunye nokusetyenziswa, sifumana iintlobo ezintathu:
Luhlobo lwenkuku isetyenziswe kuqeqesho lwamahashe lokubonisa ukuxhuma. Oku kungenxa yokuba umzimba womkhweli usondele kakhulu kulo wehashe ngoko ke umqhagi kufuneka ube mfutshane (15 mm) ukuze ubelungele umkhweli kunye nesilwanyana.
Ihlala isetyenziselwa ukukhuthaza ihashe ngaphambi nje kokutsiba.
Ngaba yinto eqhelekileyo isetyenziswe ngokubanzi. Imalunga ne-20mm ubude kwaye ilungele wonke umntu onobude obuphakathi.
Isetyenzisiwe Yokunxiba, ngakumbi abo mde kakhulu. Ilinganisa malunga ne-30 mm.
I-spurs kufuneka icwangciswe ilungiswe kakuhle kwisithende sebhuthi yomkhweli. Kuya kufuneka banxibelelane ngokugqibeleleyo nesithende ngaphandle kokukhama kodwa ngaphandle kokuhamba. Ngokufanelekileyo, kufuneka bahlale emaphethelweni esithende, kuxhomekeke kuhlobo lwe-boot ecacileyo. Ukwahlula ukuba yeyiphi ehamba ngonyawo ngalunye, ngasekunene nangasekhohlo.
Kubalulekile ukuba uyazi ukuba ungayihlengahlengisa njani imitya kwaye ukhethe ubungakanani obufanelekileyo. Singafumana ubungakanani babantwana, ulutsha, abasetyhini kunye namadoda. Kodwa oku akuthethi ukuba iibhutsi zabafazi zezona zihambelana kakuhle nezihlangu zomfazi. Kuxhomekeka ekubeni siza kuyibeka phi, ubude be-spur kunye nencasa yethu. Eyona nto ilungileyo kukubonisana neengcali zevenkile ezenza ukuba yeyiphi ubukhulu obukufaneleyo.
Njengoko besitshilo ekuqaleni, ii-spurs zinokusetyenziswa nakweyiphi na indlela yokuziphatha yamahashe. Ukuzisebenzisa kwihashe lethu, Kuya kufuneka sinike ngokufutshane kwaye ngokuchanekileyo kwicala lesilwanyana. Ezi zinto zichukumisayo ziya kunikwa ngesithende ukuze sandise isantya, sijike okanye siye phambili.
Ukusetyenziswa okuhle kwesiqholo, sisazi ngawo onke amaxesha imeko yethu yengqondo (kuba ukuba sinomsindo okanye sikhathazekile kunokusikhokelela ekusebenziseni gwenxa) kwaye iintshukumo esizenzayo kunokuba yindlela yokunxibelelana nesilwanyana sethu. Indlela yokunxibelelana kunye nokufumana impendulo kwihashe ngokufanelekileyo. Ayizukwenzakalisa, kodwa kukuphucula ubuchule bethu njengabakhweli bamahashe. Nangona kunjalo, siyakhumbula ukuba ukusetyenziswa kwayo akuyomfuneko ekukhweleni.
Ndiyathemba ukuba ukonwabele ukufunda eli nqaku njengoko bendilibhala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amahashe kaNoti » Amahashe » Iindidi zespurs kunye nendlela yokuzisebenzisa ngamahashe
I-Spanish Equestrian Federation: Imvelaphi kunye nezinto ezenziwayo
Amahashe okudlala, sithetha ngeemodeli ezixabisekileyo